Tonom-bavaka nataon'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efeso – FJKM Ambavahadimitafo Tonom-bavaka nataon'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efeso |
Tonom-bavaka nataon'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efeso
Publié le 15 janvier 2009 à 12:01
« Mangataka aho mba hahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoa-pampana tokoa izay anasoavany antsika mpino, araka ny fiasany tsy hay tohaina sy mahery vaika » Efes 1,19 DIEM
Tonom-bavaka nataon’i Paoly ho an’ny fiangonana tany Efeso izany mba hahafahany mijoro amin’ny fahalalana tsara an’i Kristy. Mpino manko izy ireo ka tokony hahatsapa eo amin’ny fiainany ny mampiavaka ny fiarahan-dalana amin’ny Tompo.
Goavana, tsy hay refesina
Rehefa mamonjy sy manafaka ny olony Andriamanitra dia maneho ny heriny manokana, izay tsy ananan’ny olombelona na hita eo amin’ny zava-boary hafa. Io toetra ambony sy mihoatra noho izay azon’ny olona sainina io no tian’ny apôstôly hampahatsiahivina, mba hatoky feno an’Andriamanitra ny Efesianina raha sendra fahasahiranana mila hahakivy eo amin’ny fiaraha-monina. Tokony ho fantatr’izy ireo fa goavana ny herin’Andriamanitra ka tsy mety lefy, tsy mety tola. Noho izany dia tena azo ianteherana amin’ny zava-drehetra ny Tompo, satria afa-mifehy ny toe-javatra isan-karazany mety hiseho.
Isika ankehitriny koa dia taomin’ny Tenin’Andriamanitra mba hatoky ny halehiben’ny fahefan’ny Tompo, ka hanankina feno ny fiainantsika Aminy fa tsy hiantsampy amin’ny fanahy hafa na amin’ny fomban-tany lazaina fa manan-kasina. Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy, ihany no nanome antsika ny aina mahavelona sy namonjy antsika tamin’ny finoana mba hivelaran’ny fiainantsika ka ho tody amin’ny fenitra napetrak’Izy mpahary.
Tsy hery mangeja na mampiraviravy tanana Andriamanitra, fa manetsika ny olona mba handroso (dynamique). Koa ny osa dia hatanjahiny mba ho afa-mijoro, ny reraka an-dalana dia tafiany hery mba hanohy ny diany, ny malemy dia omeny fahefana mba hiasa. Na iza na iza nandray ny herin’Andriamanitra dia tsy mitomoe-poana, fa misikim-ponitra mba hahefa tsara ny adidy nampiantsorohan’ny Tompo azy.
Araka izany dia hita eo amin’ny fomba fihetsika vaovao asehon’ny olona rehefa miasa sy mandray andraikitra ny vokatry ny fifampikasohany tamin’ny Tompo. Tsy azo atao ny misandoka izany amin’ny teny tsara lahatra na ny fikasana tsara, fa ny atao no manaporofo azy. Eo amin’io asa io izany vao mety hitranga ny fifangaroan’ny fihetsiketsehan’olombelona sy ny ainga avy amin’ny Fanahin’Andriamanitra. Efa nampitandrina ny Tompo fa mety ho voafitaka eto ny mpanara-dia Azy (Mat 24,24). Tsy misy afa-tsy ny fahazavan-tsaina avy amin’i Kristy ihany no ahazoana manavaka izany.
Misy fiantraikany mandrakariva amin’izay mandray azy ny herin’Andriamanitra, satria toy ny angôvo mahery vaika (énergie) izany ka tsy fantatra raha tsy efa midona amin’izay lalovany na iantefany. Avy amin’io hery mandaitra io no ahafahan’ny mpino mifehy ny zava-mitranga samihafa izay mila handifotra azy : mety ho korontana izany, na tsy fahampiana, na fampianaran-diso, na faharavam-pananana.
Fifehezana hita maso izany ka mahatonga ny olona hampiasa ny vatany amin’ny fankatoavany an’Andriamanitra ; tanjaka ahazoana manova ny zava-misy no atolotry ny Tompo, ka mampijoro ny mpino amin’ny fiantsoana sy ny fanompoana.
Koa ny Tompo Andriamanitra, izay manan-kery tsy hita pesimpesenina, no maniraka antsika hiroso amin’ny aloha kokoa amin’ny fandraisana andraikitra sy mampahomby ny asantsika amin’ny alalan’ny Fanahiny.